Ihe 5 kacha mma iji mepee Akaụntụ Akaụntụ
Ihe 5 kacha mma iji mepee Akaụntụ Bank Banyere
Ihe kachasị mkpa nke 5 maka akaụntụ akụ dị na mpaghara ndị a:
Nye nchekwa nchebe site na ikpe
Nye ihe di iche iche nke ihe onwunwe
Ikwusi ike (lee n'okpuru maka ihe akaebe)
Udo nke uche
Ihe ndị a niile bụ ntọala nke akwụkwọ nlekọta akụ na-efu. Onweghi ihe ohuru banyere ozi a. Kama, bido imekota ihe nile banyere ego gi na onodu ikpe gi. Lezie anya na steeti uwa taa. N'ime ọkụ ahụ, isi ihe 5 kpatara mbupụ ala na-ewu ewu ga-eme ọtụtụ ihe nghọta.
"Ọ bụrụ na e nwere otu okwu m chọrọ ịhapụ gị taa, ọ bụ nke a ... Glocal." --Natalie Keener si na fim Nọ n'ikuku
Ihe 5 kachasị maka Banking Banking
1. Nye nchekwa nchedo
US nwere naanị 4.4% nke ndị bi n'ụwa. N'ụzọ na-awụ akpata oyi n'ahụ, agbanyeghị, o nwere 80% nke ndị ọka iwu ụwa na 96% nke iwu niile n'ụwa. Dịka ọtụtụ nde ndị America, ị na-ahụ ihe ize ndụ nke ikpe n'ụlọ ikpe kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, a na-ekpughe gị oge ọ bụla ị banye n'ụgbọala gị ma ịkwọ ụgbọala. Oge ọ bụla ịre onye ahịa ọhụrụ ị nwere ike itinye onwe gị na mkpesa nke onye ọka iwu. Oge ọ bụla mmadụ na-agabiga ihe gị, ya na ikike gị ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ nwere ike ịkpalite ọgụ iwu.
Buru n’uche, ndi mmadu bu ndi dere iwu. Ọ bụghị ikike dị mma ma zie ezi na mbara igwe. Chetakwa onwe gi banyere oru nke ndi na ede iwu. Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọtụtụ n’ime ha bụ ndị ọka iwu. Mgbe ha na ede iwu ha, ì chere na ha edere ya ma ọ bụ na-emegide uru nke aka ha? Yabụ, ihe anyị kwesịrị iche bụ nke a. Ihe ọ bụla na-emebi iwu iji kwado onye ọka iwu ịnweta aka ya na akpa gị, na-emechu onwe ya ọnụ maka ọha mmadụ, bụ ụzọ ndị omebe iwu dere iwu ahụ. Ndị omebe iwu edeghị iwu ahụ na "izi ezi" dịka ebumnuche bụ isi. Edere ọtụtụ iwu iwu, yana maka abamuru nke ndị ọrụ iwu.
Anyị nwere onye ahịa bụbu ọgaranya nke usoro ikpe dị iche iche. Ọ bụ a onye isi n’otu onye isi n’otu ulo oru. Otu onye n'ime ndi oru ya, ya na ahia mbu, nyere ndi ulo ahia aka ka ha banye ya. Onye na-ahụ maka ọrụ anyị ekwuteghị na onye ahịa anyị bụkwa onye ntụzi akụ. Mgbe ụlọ akụ dara na mgbazinye ụlọ, onye ahịa ya gbara onye ahịa anyị akwụkwọ maka igwu wayo.
Ha boro ya ebubo n'ihi enweghị ọrụ onye ọrụ ya mere iji mee ka ọ mara ọnọdụ onye ahịa anyị na ụlọ akụ ahụ. Iwu mkpuchi ya jụrụ ịgbachitere ya n'ihi na ikpe gụnyere okwu ahụ bụ "aghụghọ". Paidlọ akụ ahụ akwụghị ya ụgwọ ọ bụla maka ọkwá ya. Agbanyeghị, Supremelọikpe Kasị Elu na California kwupụtara ikpe $ 2 + nde megide onye ahịa anyị. Ma ọ dabara nke ọma na ya, anyị debere atụmatụ nchebe nke akụ.
Ka afọ ise nke ọgụ gasịrị, ọ họọrọ ịkwụ ego. Ọ dịla anya o jiri nwa ya nwanyị were ụlọ akwụkwọ mahadum ma kwado nwunye ya, nwa ya na nne ya na-arịa ọrịa. Ọbụghị naanị na onye ọka iwu nke na-arụ ọrụ dị ka onye na-arụ ọrụ ụlọ akụ wepụrụ ya ihe nile ejikọghị ya. Ọ bopụkwara nwunye ya, ụmụ ya na nne ya. Ọ gbara ha akwụkwọ maka nkwado ọ bụla ha nwetara n'aka ya n'ime afọ anọ bu ụzọ.
Ee, onye na-emefu ego na-akwụ ụgwọ maka nwa ya nwanyị maka ego nna ya kwụrụ ya maka kọleji, ụlọ, nri, wdg. O were iwe. Kpamkpam mepụtara. Ọ bụ eziokwu na ha nwere ike ịgba nwa ya nwanyị akwụkwọ maka ego ndị mụrụ ya kwụrụ maka agụmakwụkwọ ya? Ikekwe ajụjụ dabara adaba, bụ, "kedu ihe na - akpata arụmụka ndị ọka iwu na-enweta n'aka ha na akpa mmadụ?" Asjụ ajụjụ a ga - agwa gị ụzọ edere iwu ahụ. Ehee, onye ọka iwu na-eme dị ka onye na-eweta ego na-enwetara otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ihe a kwatara akwata.
Adaberela na Insurance
Ewepụghị ihe ndị ahụ edere n'ụkpụrụ nke oge a bụ ezigbo mbipụta ụrọ na ngbanwe. Anyị ahụla ya ugboro ugboro mgbe ndị ahịa na-akpọ akụkọ ọjọọ. Ndị ọka iwu nwere ike ịnakọta ego ahụ ugboro atọ yana ego ndị ọka iwu. Ha ga - eme ya ma ọ bụrụ na ha ga - eme ka onye na - ekpe ikpe Robin Hood kwenye na enwere ntụhie ụgha. N’ihi nke a, ha ga-atụba n’ahịrị ma ọ bụ abụọ gbasara imebi iwu n’iwu, nke iwu kwadoro ma ọ bụ na ọ zaghị.
Yabụ, na agbanyeghị ọrụ gị, otu doro anya bụ nke a. Mee atụmatụ n’amaghị ama mgbe ọ ga-abịa gị ikpe gị n ’ọzọ. Mepee akaụntụ oke ọnụ Jide akaụntụ ahụ na ntụkwasị obi nchekwa ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Nchikota a gha enyere gi aka idozi ego gi. Nwere ike hie ụra nke ọma n ’abalị ịmara ọgba tum tum iwu agaghị emetụta gị.
2. Mgbanwe Di Akpa
Gịnị ma ọ bụrụ na mmadụ agba gị akwụkwọ na ikpe ahụ napụrụ gị ụlọ akụ US ego gị ozugbo? Ego ole ka ị ga - eji chebe onwe gị? Kedu ka ị ga-esi akwụ ụgwọ gị? Anyị nwere onye otu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nkwekọrịta. N'ime igwe na-acha anụnụ anụnụ, otu ụlọ ọrụ steeti bịara wee jide ya na mmadụ isii n'ime ndị ọrụ ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, ha na-ewepụ ihe ndekọ ego ya; ha nile maka imebi mkpuchi inara mkpuchi nke ndi oru. N'ụzọ nkịtị, ha amaghị na ha mere ihe ọ bụla dị njọ.
Ọ mere ọtụtụ nde dollar kwa afọ. Agbanyeghị, o nweghị ohere ịnweta ego iji gbapụta onwe ya. Ọ na-aga na-enweghị asị na ya enweghị ego iku ọkaịkpe iji chebe ya. Ndị ikpe US enweghị ikike itinye ego ngwa ngwa na akaụntụ na mba ndị ọzọ. Nke a bụ ikpe karịsịa ma ọ bụrụ na ụlọ akụ ahụ enweghị alaka US kwekọrọ; ọzọ ma ọ bụrụ na ejidere na ntụkwasị obi nke oke osimiri.
Inweta ego site n’akụkụ mmiri na-enye gị ikike igbochi mmadụ imebi gị site na iji aka nke mkpịsị aka ukwu. Ọ nwere ike inye aka gbochie onye ọka iwu nke iwu ma ọ bụ onye ọrụ gọọmenti nwere ike ijide gị ebubo ụgha. Na-enweghị ihe nchebe a, ha nwere ike ịdọrọ ahija na mberede n'okpuru gị, na-amanye gị ka ị daa na ebere ha. Ọ na-etinye gị na njikwa ma na-enyere aka ịchebe gị n ’ọkwọ ụgbọ ala nke ego ị tara ahụhụ kpata.
Nhọrọ Ego ozo
N’edetu ọzọ, ị ga-eburu ụzọ nọrọ n’ibe ego. Eleghị anya ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị na - achọ ụzọ ọzọ ị ga - esi tinye ego na ụzọ ka mma isi ejikwa ego gị. Na, dị ka o yikarịrị, ị na-enwekarị ọwa ozi mgbasa ozi dịka: CNN, MSNBC, Fox, Bloomberg ma ọ bụ YouTube. May nwere ike ịlele ha ka ha wee zere ọnọdụ akụ na ụba na ọnọdụ nke ngwaahịa ngwaahịa.
Ndị isi ego dị ka Warren Buffett, George Soros, na Dr. Michael Ọkụ (Onye hiwere Scion Capital, LLC) bụ naanị mmadụ ole na ole na-ebu amụma nke ọdịda ụlọ US nke 2008. Ha na-ekwupụta ịdọ aka ná ntị maka Oke Mbelata na Mbelata US dollar ọzọ. Ha na-ekwu ugbu a na ọ na-ada, mana ha amaghị mgbe.
May nwere ike ịmara na Buffett na Soros na-anara ego ego si Banks America ruo ọtụtụ afọ. Ndị na-etinye ego ego amụtaghị ọtụtụ ihe site na anyaukwu na aghụghọ nke ha mehiere ndị America. Ọzọkwa, ha ga-atụ anya ego ịkwụ ụgwọ ọzọ. Oge a, enwere ike ọ bụghị ịbụ ihe mgbapụta nke gọọmentị US n'ihi na ndị gọọmentị US nwere ike inwe ego zuru ezu inye.
America bụ mba kacha nwee ụgwọ n'ụwa. Onu ogugu bu nke kachasi elu nke mba obula no n'akụkọ ihe mere eme nke uwa. N'ezie, enwere ebe nrụọrụ weebụ ebe ị nwere ike soro ya Ụgwọ US na ozugbo. Ndị ọkachamara na-ebu amụma na enweghị ike ịkwụghachi ego ahụ na 40 afọ. Ọtụtụ n'ime anyị ga-eche eziokwu anya na anyị enweghị nkwekọrịta azụmaahịa ISDA yabụ anyị ga-enwe ike nzuzo anyị ụmụ nwoke ukwu. Yabụ, ihe ọzọ kacha mma anyị nwere ike ime bụ ichekwa ego ha nnabata
3. Sounder Systems Banking
On Ego zuru ụwa ọnụNkwupụta kachasị ọhụrụ, nke a kpọrọ, “'slọ 50 Safest Banks nke Safwa,” enweghị nnukwu ụlọ akụ US ama ama ama emeghị aha ahụ - ọbụghị otu. N'ime ụlọ akụ 50, United States nwere naanị atọ na listi ahụ. Obere okwa ulo oru ugbo ato hibere isi na #30, #45 na #50 bu nani ulo oba ego ndi US mere ya. Enwere ahịrịokwu ụfọdụ eji na njikọ yana nnukwu akụ ndị US iji kọwaa mbibi na-abịanụ nke na-ebu amụma na-aga: big buru oke ibu na-ada. Nke a enweghị ike isi na eziokwu.
Ozugbo ụlọ akụ malitere ịghọ enweghị ihe ọ bụla (enweghị ike ịkwụ ụgwọ) n'ihi ụgwọ dị oke egwu na enweghị ebe ọ bụla iji gbanwee oge a maka ụlọ ọrụ gọọmentị, ego na itinye ego gị ga-efu. Gbanyere.
Ndị ụlọ akụ ga-eji ego ị chekwaa kwụọ ụgwọ nke ya. Dị ka ihe mere na Gris na nso nso a, ụlọ akụ ga-emechi. Mgbe nke a gasịrị,, gaghị enwe ike iwere ego n'aka igwe ndọrọ ego maka igwe ego agaghị efu. Mmadu nwere ike ikwuhie n'uzo si, "Ee mana o buru na m tinye ego m n’elu ya, otu ihe a emee?"
Ebe ahụ ka anyị batara. Anyị na-enyocha ụlọ akụ dị ike, kasị dịrị nchebe n'ụwa ma na-eme atụmatụ kachasị dabere na data akụ na ụba ha. Anoghi n'ulo oloko adighi esi na listi “kachasi nma n’ uwa ”bata na nrukota ego. Ma gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na mmadụ ji akụ ejighi akụ na - adaghị na ndepụta "kachasị mma"? Gịnị ma ọ bụrụ na akụ ahụ bụ na mba kachasị ụgwọ n'ụwa? Ugbu a, nke ahụ bụ ihe kpatara ezi nchegbu.
Iche Iche Ihu: Were Ihu Egwu
Ọtụtụ ndị isi egwuregwu ego na ndị ọkachamara n'ihe banyere akụ na ụba na-adọ aka ná ntị banyere dollar na-ada. Nsonaazụ a bụ n'ihi ụgwọ dị mbara igwe, ịdọrọ ọnụ ahịa mmanụ na akụ na ụba anyị na ọnụego mmụba. Dabere na Thomas Metcalf, Economist, stockbroker na onye edemede maka ndị na-ahụ maka ego n'ịntanetị, Zacks, "Ọnụ ọgụgụ ego nke Federal Reserve maka onu ogugu bu 2 percent. Mgbe onu ogugu dakwasiri ya ma gosiputa ihe omuma nke ichikota, Federal Reserve na otutu ndi oru aku na uba gosiputara nchebara anya. Ọnụ ọgụgụ nke onu oriri na-ada ada, ị gaghị enwe ike ịjụ ma ọ bụrụ na ọ daa n'okpuru efu. Nke ahụ bụ nchegbu nke akụnụba. "
Tinye ego gị na ebe nchekwa dị nchebe, nke na-adịghị na nnukwu ụlọ akụ US, ọ bụghị onye na-ere ngwaahịa na United States, na-ejikọta ya na United States. Ichekwa oke nke itinye ego gị na nchekwa, iwu, akaụntụ mbupụ n’otu n’ime ụlọ akụ kacha dịrị nchebe n’ụwa.
4. Mgbada emebi emebi
Echekwala akwa gị niile n'otu nkata. I mee nke a, ị ga-eme ka ohere iha n’iyi ghara ifu ego na itinye ego gi n’aka. Yabụ, ọ bụrụ n ’ịnọ n’ ọrụ ebe enwere ike gbaa gị akwụkwọ n’oge ọ bụla, ọ dị mma ibugara ụfọdụ akụ gị n’ebe echekwabara ebe ha na-agaghị ejikọ gị. Ọ bụrụ na ị lụọla di ma ọ bụ nwunye, ma ọ bụrụ na ị lụbeghị, nwee ezinụlọ ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eche echiche nke ọma, itinye ego n'akụkụ mmiri bụ ezigbo ụzọ iji belata nsogbu ị na-enwe.
N’ezie, anyị hụrụ ndị ezinụlọ anyị n’anya ma na-elekọta ya. Ma, nke ahụ apụtaghị na anyị kwesịrị iji ihe nketa anyị kwụọ ụgwọ niile ha ji. Ndị ezinụlọ dị ndụ na-akwụ ụgwọ iji kwụọ ụgwọ ndị ha hụrụ n'anya nwụrụ anwụ na akụ nke onye nwụrụ anwụ. Itinye ego n’ezi n’ụlọ tinye aka na ya, nke a na-ejide n’aka, ga - echekwa ọnọdụ diọkpara gị ka ebibie ya mgbe onye ọ hụrụ n’anya nwụrụ.
5. Udo nke Obi
Ejila ụgbọ mmiri na-ekpuchi.
Doug Casey, onye na-ede ego na onye na-ere ahịa n'ahịa na-ere ahịa na-eme ka ihe dị n'etiti ọdịda (ọdịda nke) US na ọdịda nke Alaeze Ukwu Rom. Casey kwuru, sị, "Anyị enweghị ike izere iwu nke abụọ nke thermodynamics, nke na-eche na entropy ahụ meriri ihe niile na na oge oge, usoro niile na-eme ka ọ daa mbà. Ma na usoro ihe dị mgbagwoju anya na-aghọ, ka ike ọ na-ewe iji jide ya. Oke ma dị mgbagwoju anya, njikọta, yana ịkwado ibe ya, ọ na-esikarị ike ịda mbà na ọdachi na-akpata ọdachi. Nke a gụnyere mba na mmepeanya. "
Ma ọ bụ, anyị nwere ike ikwu na egwú egwú a ma ama, Ọbara, Ọcha na Mmiri, "Ihe dị elu ga-agbadata."
Global + Mpaghara = “Glocal”
Enwere ihe nkiri 2009 onye nkiri George Clooney, akpọrọ Nọ n'ikuku. N'ime ya, Natalie Keener, onye na-eto eto, nwere oke agụụ, onye goro ọrụ, kwuru na okwu a "otuto." Ndị okenye Anna, tinyere Maazị Clooney, na-agbagha okwu a. Anna kọwaziri na '' glocal '' bụ okwu ọhụrụ nke e ji akọwa njikọta ma ahịa ụwa ma obodo.
Glocal na-egosiputa na ụwa dị obere n'ihi na nkà na ụzụ, azụmahịa efu na azụmahịa acumen. Kpao na ugb oala ma gbasaa uzo gi, ma obu hapuru. Inwe nchekasị nke ụwa n'oge a na ọ dịghị abacha ọzọ-ọ dị mkpa. Banyere akụ na ụba na-enye ụzọ dị ezigbo mkpa ma dị mma iji gbasaa oghere ego gị.
Enweela aghụghọ dị ukwuu, wayo, aghụghọ na izu ohi site n'aka ụlọ ọrụ ụlọ akụ US. Otu a ka ọ dịịrị ndị na-egwu ahịa ngwaahịa na Federal Reserve. Anyị na-eche nchikota nke ego akpatala ego na nke anụ ahụ na nke 'ụwa niile.' Nke a na - eme ka ọ bụrụ oke mmiri ozuzo zuru oke maka ndakpọ ego ọzọ.
Kpọọ nọmba ma ọ bụ mpempe ajụjụ zuru ezu na ibe a maka nkwado na enyemaka. Mee nchọnchọ nke gị. Chee echiche maka onwe gị ma chee n’ime mpụga igbe-ma chee n’obodo ọzọ. Ekwela ka usoro nke ụlọ akụ US. Ichekwa ma jide ụfọdụ n’ime ego gị n’ime ihe dị n’akụkụ mmiri.
<Isi nke 1
Isi nke 3>